1XBet बोनस, निक्षेपमा प्रोमो कोड १xbet प्राप्त गर्नुहोस्
शर्त कम्पनी 1xbet बोनस र प्रचार कार्यक्रमको मामला मा धेरै विविध छ. सबै भन्दा उत्साही खेलाडीहरूले यहाँ मनोरन्जन पाउनेछन्.
कार्यालयले निम्न बोनस प्रदान गर्दछ:
“%” गेमि account खाताको ब्यालेन्समा – रकम खाताको ब्यालेन्सको आधारमा दिनको शून्यबाट दैनिक निकासीको शून्यमा गणना गरिन्छ. अधिक बेट्स दिनको हिसाबमा गणना गरिन्छ, ब्यालेन्सको उच्च प्रतिशत.
जित्ने अवसर 200 प्रतिशत – भाग लिन तपाइँले दर्ता गर्नु पर्छ, कम्तिमा जम्मा गर्नुहोस् 100 रूबल र एक शर्त बनाउन, तिनीहरूको संख्या असीमित छ. पदोन्नती एक कम्प्युटरमा मात्र लागू हुन्छ, एउटा आईपी ठेगाना, एक फोन नम्बर र एक परिवारको सदस्य.
गोल बिना फुटबल – कार्यमा भाग लिन, तपाईंले अफिसमा लग ईन गर्नुपर्नेछ र १ मा आफ्नै बेट्स बनाउनु पर्छ×2 र यदि शर्त खेल्छ, तपाईं प्राप्त गर्नुहुनेछ 24$ तपाइँको मुख्य खातामा.
साइबर युग ” जोखिम बिना खेल” – यदि तपाइँ साइबर खेल घटनामा शर्त लगाउनुहुन्छ र हराउनुहुन्छ, यस पदोन्नती को शर्त अन्तर्गत, पैसा तपाईंको खातामा फर्किनेछ.
VIP कैशब्याक – जब तपाईं क्यासिनोमा खेल्नुहुन्छ तपाईंले थप क्यासब्याक पाउनुहुनेछ
शुक्रबार बोनस – शुक्रवार तपाईंको खाता जम्मा गर्नुहोस्, र बुधवार बनाउन5बेट र उठ 100 यूरो तपाईको मुख्य खातामा.
कसरी बोनस खाता प्रयोग गर्ने
पहिलो निक्षेपमा पूनरावलोकन फेरि कसरी जित्ने
1xbet ले पुरस्कारको धेरै प्रकार प्रदान गर्दछ, साथ साथै एक महान प्रोमो कार्यक्रम, तर सबै भन्दा सामान्य बोनस एक जम्मा बोनस छ, पहिलो जम्मा. बोनसको सार निम्नानुसार छ: नयाँ खेलाडी, पूर्ण दर्ता पूरा गरेपछि, कम्तिमा एक क्लिक जम्मा भन्दा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट $2, उसको बोनस खातामा पहिलो जम्मा बराबर रकम देख्नेछ.
बोनस निम्न रूपमा काम गर्दछ: खेलाडी जम्मा गरियो $100, र बोनस खाताले राशि देखाउँदछ 100% पहिलो जम्मा, अर्को अर्को $100. बोनस खातामा पैसा प्रयोग गर्न उनीहरूले १ गुट सट्टेबाजको कार्यालयमा सट्टेबाजी गर्न पाँच गुणा ब्याज गर्न आवश्यक छ।, एकल जस्तै बेट्स र कम से कम बाधा संग व्यक्त 1.4 प्रत्येक घटनालाई ध्यानमा राखिन्छ. खेलाडीसँग ठ्याक्कै छ 31 दिनसम्म बकाइ दिन को लागी 00:00.
अफिससँग बृहत बोनस प्रोग्राम छ र क्यासिनोमा, त्यहाँ निम्न पदोन्नतीहरू छन्:
100% पहिलो निक्षेपमा बोनस
सम्म क्यासब्याक 11% – प्रतिशत र तपाईंले प्राय: पुरस्कारहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ सहभागीको वफादारीको स्तरमा निर्भर हुन्छ. यदि यो आर्जनको समयमा क्यासिनोको अगाडि प्लसमा हुन्छ भने यो बाहिर दिइएन. रिपोर्टिंग अवधिको अन्तिम दिनमा, खाता को राशि भन्दा कम हुनु पर्छ2यूरो. VIP- स्थिति पैसा को लागी सबै दांव गणना गरीन्छ, सबै अन्य पदहरूको लागि – हराएको पैसा को राशि बाट. रिजर्भ मुख्य खातामा क्रेडिट हुन्छ र शर्तमा पर्दैन.
100% पहिलो जम्मा मा अप गर्न 300 यूरो + 30 फ्रीस्पीन्स – न्यूनतम जम्मा 10 यूरो, फ्रीस्पिनहरू गोल्डको स्लट बुकमा जारी गरिन्छ: क्लासिक. फ्रीस्पीनको सहयोगमा प्राप्त पैसा बाजी गर्न आवश्यक पर्दैन.
50 दोस्रो जम्मा प्रतिशत – खेलमा फ्रिस्पिनहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ “क्लियोपेट्राको द लिजेन्ड”. जुन नगद ब्याजिंग पछि जारी गरिन्छ. न्यूनतम जम्मा छ 15 यूरो, अधिकतम हो 350 यूरो.
25 तपाईंको तेस्रो जम्मा प्रतिशत बोनस – सौर क्वीन खेलमा फ्रीस्पिनहरू, को न्यूनतम जम्मा 15 यूरो, अधिकतम 450 यूरो.
तपाईलाई बोनस खाता हुनको लागि, तपाईंले कार्यालयमा लग ईन गर्नुपर्नेछ र तपाईंको पहिलो जम्मा गर्नुहोस्.
बोनस अंकहरू पुरस्कारका लागि आदान प्रदान गर्न सकिन्छ, र तपाईं यी बिन्दुहरू निम्न तरिकाले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ:
बोनसको साथ खेल खेल्दा सामान्य रूपमा खेलाडीलाई छाती खोल्न लगाउँछ, भाग्य को पा spin्ग्रा घुमाउनुहोस्, वा लटरी टिकट अनुमान गर्नुहोस्. त्यस्ता खेलहरूमा धन्यवाद, ट्याब्लेट वा स्मार्टफोन जस्ता पुरस्कारहरू प्राप्त गर्न सम्भव छ.
खाताको शेष रकममा पदोन्नति प्रतिशतको सदस्य बन्नुहोस् – जितको रकम सबै जित्ने बेट्सबाट हराएको नाफा र हराएको बेट्सको राशि बराबर हो. उदाहरण को लागी, यदि तपाईं शर्त 10 युरो को अनमोलतामा 1,5 र जीत, यो तपाईंको आफ्नै फाइदाको लागि हुनेछ. 10 * 1.5 – 10 = 5. यदि तपाई हराउनुहुन्छ भने, तपाईं पाउनुहुनेछ 10.
दिन पदोन्नति को भाग्यशाली विजेता को एक सदस्य बन्नुहोस् – कम्तिमा एक शर्त बनाउन5युरो को अनमोलतामा 1.8. प्रमोशन साइटमा जानुहोस् र तपाईंको टिकट लिनुहोस्. दिन को अन्त मा एक चित्र को हुनेछ, यदि तपाइँको टिकट विजेताहरु बीच हो, तपाईंले पोइन्टहरूको निश्चित संख्या प्राप्त गर्नुहुनेछ.
नियमित बोनस, को गुणांकमा आधारभुत पैसामा रूपान्तरण गरियो 1:1 र मुख्य खातामा हस्तान्तरण गरियो, ती शर्तमा खर्च गर्न सकिन्छ. र दोस्रो प्रकारको बोनस वा पोइन्टहरू पुरस्कारको लागि आदानप्रदान गर्न सकिन्छ र १xbet प्रोमो कोड शोकेसमा खर्च गरिन्छ।. त्यहाँ तपाईं एक निःशुल्क शर्त किन्न सक्नुहुन्छ, भाग्य को पा wheel्ग्रा मा र अधिक धेरै.
यो बोनस खाताबाट पैसा फिर्ता निकाल्न असम्भव छ, तिनीहरू बुकमेकर सर्तहरू अनुसार wagered हुनु पर्छ, र त्यसपछि तिनीहरू वास्तविक पैसामा रूपान्तरण हुन्छन्, जुन प्रयोग गर्न सकिन्छ, शर्त लगाउनुहोस् वा फिर्ता लिनुहोस्.
ती पोइन्टहरू जुन प्रोमो कोड स्टोरको लागि लक्षित थियो त्यहाँ मात्र खर्च गर्न सकिन्छ.
पहिलो निक्षेप बोनस 1xbet मा मात्र होइन सबैभन्दा लोकप्रिय हो, तर अरू धेरैमा पनि, कृपया ध्यान दिनुहोस् कि बोनस कार्यक्रम, यो bk मा अनिवार्य अंश होईन, तपाईं आफ्नो व्यक्तिगत क्याबिनेटमा पदोन्नतीहरूमा भाग लिन सक्नुहुन्छ.
तपाईको पहिलो जम्मामा बोनस फिर्ता जित्ने क्रममा, तपाईले बेट्समा शर्त लगाउनु पर्छ जस्तै एकल र अभिव्यक्तिको नमिल्दोसँग 1.4 प्रत्येक घटना को लागी, विस्तृत रूपमा विचार गर्नुहोस्:
एकल घटनाहरूमा बाधा दिन यो आवश्यक छ 1.4. नतिजा मा दांव, जम्मा, विकलांग गणना. एक्सप्रेस दांव कम्तिमा पनि नहुनु पर्छ 1.4. यदि तपाईं एक पार्ले शर्त छनौट गर्नुभयो भने, तपाईंले सम्झनु पर्दछ कि यदि शर्तमा एउटा घटना हरायो भने, सबै शर्त जफत छ.
कुनै जम्मा बोनस ती बोनसहरू हुन् जुन गेमि account खातामा नगद आवश्यक पर्दैन. सामान्यतया त्यस्ता बोनस १xbet क्यासिनो द्वारा प्रस्ताव गरिएको छ, साइबरस्पोर्टहरूमा शर्त बोनस प्राप्त गर्न पनि सम्भव छ.
क्यासिनोमा बोनस प्राय सबै स्लटहरूमा अवस्थित छन्, यस समयमा सबैभन्दा लोकप्रिय, यी खेलहरू सुनको पुस्तकमा, क्लियोपेट्राको महापुरूष, सौर रानी र अन्य.
पनि, तपाइँ बिंगो जस्तै खेल मा बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, संख्याको साथ एक कार्ड खेल जहाँ तपाईं पोइन्टहरूको एक निश्चित संख्या स्कोर गर्न आवश्यक छ.